सचेत बन्नुहोस्: राजस्थानमा आँधीबेहरीको बबण्डर, १/२ बजे सम्म काठमाडौंमै आइपुग्न सक्ने ! || सुनौलो नेपाल
सचेत बन्नुहोस्: राजस्थानमा आँधीबेहरीको बबण्डर, १/२ बजे सम्म काठमाडौंमै आइपुग्न सक्ने !
राजस्थानको सो हुरी अरेबियन समुन्द्र र बंगालको खाडीबाट विकास भएको बताइएको छ । भारतको नयाँ दिल्ली र गुरगाउँ, नोइडा लगायतका क्षेत्रमा हुरीको असर देखिएको बताइएको छ । यस्तै बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश लगायतका क्षेत्रमा समेत त्यसको असर देखिएको थियो ।मौसमविद् गंगा नगरकोटीले राजस्थानको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने बताइन् ।
उनले पश्चिमी वायुको प्रभावले नै राजस्थानमा त्यस्तो घटना भएको जनाउँदै पश्चिमी वायु नेपालको दक्षिण पश्चिम भागमा प्रवेश गरेको जनाइन् । उनले संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि दिउँसो १–२ बजे सम्ममा हुरी बतास आउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।